Channable: Fahano ny vokatrao amin'ny tranokala fampitahana, Affiliate, tsena, ary tambajotra doka | Martech Zone
Channable: Fahano ny vokatrao amin'ny tranokala fampitahana, mpiara-miasa, tsena ary tambajotra doka
Alatsinainy, Novambra 23, 2020 Alatsinainy, Novambra 23, 2020 Douglas Karr
Ny fanatrehana ny mpijery misy azy ireo no iray amin'ireo fotoana mety indrindra amin'ny tetikady marketing dizitaly. Na mivarotra vokatra na serivisy ianao, famoahana lahatsoratra, fandefasana podcast, na fizarana horonan-tsary - fametrahana ireo zavatra izay misy ifandraisany, ny mpihaino mifandraika dia manakiana ny fahombiazan'ny orinasanao. Izany no antony saika ny sehatra rehetra dia samy manana ny interface ho an'ny mpampiasa sy ny interface iray azo vakina amin'ny masinina.
Raha miverina mijery amin'ity taona ity isika dia nivadika ho mpivarotra sy fivarotana ecommerce ny fanidiana. Rob Van Nuenen, Tale jeneralin'ny manam-pahaizana Channable sy e-commerce, dia manome izao fomba fijery manaraka izao momba ilay fanakorontanana:
Ny biriky sy ny rihitra dia nanokatra fivarotana raha tsy nanana fanatrehana an-tserasera teo aloha izy ireo. Ny tsy nampoizina dia ny hafaingan'ny faingana fivarotana kely kokoa no nipoitra ary iza ny tompony - mpivarotra tsy an'asa na tsy an'asa tato ho ato izay namorona fivarotana ho an'ny vokatra mangataka fangatahana hahafahan'izy ireo mitazona karama hatrany.
Fivarotana an-tserasera no fanamafisana ny fantsona izay amidiny - manerantany
Fiantsoana fanairana ny COVID fivarotana ara-tsosialy - ary izao dia raisina ho fantsona ilaina
Fantsona an-tserasera toa Google MAFY amin'ny fanohanana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fitazonana ireo mpividy eo an-toerana
Ny sehatra misy azy, Channable, dia sehatra e-varotra manerantany manome hery ny mpivarotra dizitaly, marika ary mpivarotra antserasera handresena ireo fanamby sy fotoana mety ireo.
Inona no atao hoe famokarana vokatra?
Ny fahana vokatra dia rakitra nomerika misy andian-dahatsoratra fampahalalana momba ny vokatra marobe. Ny fahana vokatra dia azo ampiasaina hananganana data miaraka amin'ny tena izy avy eo amin'ny sehatra ecommerce na tahiry ivelany mankany amin'ny rafitra hafa - ao anatin'izany ny fitantanana Affiliate, sehatra marketing marketing mailaka, media sosialy, sehatra ecommerce, ary / na sehatra fitantanana doka.
Channable: Amidio ny vokatrao na aiza na aiza
Channable manolotra fitaovana an-tserasera ho an'ireo masoivohon'ny marketing sy mpivarotra antsinjarany handefasana ny vokatra na serivisin'izy ireo amin'ny tsena marobe, motera fampitahana ary sehatra afiliana. Miaraka amin'ny Channable, ny orinasa dia afaka manivana, mameno ary manatsara ny mombamomba ny vokatra mora foana mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Avy eo ny sehatra dia mandefa ny fampahalalana voatsabo ho an'ny fantsona fanondranana izay safidiny (ohatra Amazon, Shopping.com, na Google).
Anisan'izany ireo fantsona fitantanana fahana amin'ny fantsona
Fanasokajiana vokatra mora - Fitaovana fitantanana fahana mamela anao handamina ny vokatrao mba hifanaraka amin'ny sokajy fantsona fanondranana. Miaraka amin'ny Channable, afaka mamorona sokajy avy hatrany ianao amin'ny fampiasana fanasokajiana marani-tsaina ho an'ireo sehatra fanaovana dokambarotra malaza indrindra. Ity dingana ity dia afaka manafaingana be loatra ny fametrahana feed vaovao, mampitombo ny fahitana anao amin'ny fantsona iray ary mampitombo ny tratranao.
Mahefa raha-avy-fitsipika - Matetika ianao dia mila mpamorona hanavao ny fahana vokatra. Miaraka amin'ny fanohanan'ny fitaovana fitantanana fahana, mora raha-avy-lalàna mamela anao 'kaody' ny tenanao. Ireo lalàna ireo dia hampiharina ihany koa amin'ireo vokatra vaovao izay ampidirina amin'ny magazanao an-tserasera. Azonao atao ny mifehy tsara ny fizotry ny vokatra isaky ny fantsona fanondranana ary manova ny vaovao amin'ny fotoana iray. Fitaovana fitantanana fahana tsara dia hanome anao valiny eo no ho eo aorian'ny fampiharana ny fitsipika ao amin'ny katalaogin'ny vokatrao.
Fahanoana angon-drakitra avo lenta - Ny fanondranana sakafom-pahalalana mahomby sy salama tsara dia hampitombo ny fahitana anao amin'ny Internet. Amin'ny ankapobeny dia mila ampitahanao ny 'saha' misy ny mombamomba ny vokatra ao anaty fahana fanafarana anao amin'ireo 'saha' takiana amin'ilay fahana fanondranana tadiavina. Fitaovana fitantanana fahana iray mahalala ny fepetra rehetra momba ny sakafo ho an'ny fantsom-pifandraisana ao aminy ary mijanona ho vaovao miaraka amin'ny fanovana sy fanavaozana.
Feeds & API - Ny fiantohana amin'ny tanana ny fampahalalana momba ny vokatra aondrana, toy ny stock, mijanona ho marina dia mety handany fotoana be dia be amin'ny anao. Ny tsena sasany dia manolotra fifandraisana API amin'ny fivarotana an-tserasera izay ahafahan'ny fifanakalozam-baovao mandeha ho azy eo amin'ny sehatra roa. Fitaovana fitantanana fahana dia afaka manafatra ny angon-drakitrao ara-potoana isaky ny elanelam-potoana mba hahazoana antoka fa ny lisitry ny vokatrao sy ny fampahalalana ny backend anao dia ampifanarahina amin'ireo fantsona fanondranana anao.
Channable dia manafatra avy any Lightspeed, Shopify, ecManager, Magento, CCVShop, Divide.NOW, WooCommerce, Mijnwebwinkel, inRiver, PrestaShop, Shopware, BigCommerce, sy maro hafa. Tolotra azo alefa mihoatra noho ny 2500 tranokala fampitahana vidin-javatra, tambajotram-pifandraisana, ary tsena ahondrana any ivelany.
Midira ho an'ny Channable
Tags: fahana vokatra fitantanana dokafahana vokatra afilianafamahanana vokatra amazonaCCVShopazo ampitainafantsonaCovid-19Mizara. IZAOecManagerecommercefahana ecommercefahana vokatra ecommercefahana vokatra marketing amin'ny mailakafitantanana fahanaGoogleinriverlightspeedmagentoMijnwebwinkelppc famahanana vokatraPrestaShopfamahanana vokatrafitantanana fahana vokatraRob Van NuenenshopifyShopwarefamahanana vokatra media sosialyfivarotana ara-tsosialywoocommerce
Ny fiantraikan'ny halavan'ny atiny amin'ny filaharan'ny motera fikarohana sy ny fiovam-po
Chili Piper: famerenana amin'ny laoniny ny fandaharam-potoanan'ny ekipa mpivarotra anao, kalandrie ary boaty fampidirana